သဒ္ဓါလှိုင်း: December 2009
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:07 AM3comments:
လူ့သမိုင်းတွင် ပြက္ခဒိန်နှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံဟောင်း၊ ပုံစံသစ်နေ့ စွဲများဖြင့် ပြုစုခဲ့ကြသော(ဂျူလီယန်ပြက္ခဒိန်) နှင့် (လူနီဆိုလာပြက္ခဒိန်) ဟူ၍ရှိခဲ့သည်။ ပြက္ခဒိန်များအနက် ရောမပြက္ခဒိန်ဟောင်းတွင် နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို မတ်လ(၁)ရက်နေ့ ဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ နှောင်းကာလ တစ်ခုရောက်မှ ဇန်နဝါရီ(၁)ရက်ကို အများဆန္ဒ မရှိခဲ့ကြသော်လည်း ထိုနေ့ကို ပြဌာန်းခဲ့ကြကြောင်း သမိုင်းတွင် ရှိခဲ့ပြန်သည်။ ခုနှစ်မှာ ဘီစီ၁၅၃ ဖြစ်သည်။ သမိုင်းခေတ် တခေတ် ဖြစ်ခဲ့သော ‘ခေတ်လယ်’ဟု ခေါ်တွင်သည့် ခေတ်တလျှောက်လုံး ယေရှုခရစ်ကို အမှတ်တရ အဖြစ် အထိမ်းအမှတ် ဖြစ်အောင်ဟု ဆိုကာ မတ်လကဲ့သို့ နေ့နှင့်လ တူညီသည့် ကာလကို ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အခမ်းအနားများ ကျင်းပ ခဲ့ကြပြန်သည်။ (၇)ရာစုနှစ်များက ဘာသာရေး ကိုးကွယ်မှု မရှိသူများကြား နှစ်သစ်ကူးနေ့တွင် လက်ဆောင် အပြန်အလှန် လဲလှယ်ရေး ဓလေ့ထုံးစံ ကိုပြုလုပ်လာ ကြသည်။ သို့ရာတွင် ယင်းထုံးစံကို သူတော်စင် အဲလီဂျီးယပ်(စ်) ဆိုသူက ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ ဂရီဂိုရီယန် ပြက္ခဒိန် အတည်မပြုခင်၊ အနောက်ဥရောပနိုင်ငံအများစုတွင် ဇန်နဝါရီ(၁)ရက်ကို နှစ်သစ်ကူးနေ့အဖြစ် တရားဝင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ ဂရီဂိုရီယန် ပြက္ခဒိန် အတည်ပြုသည်အထိ မတ်လ၂၅ရက် ကိုတရားဝင် ကျင်းပခဲ့ကြရာက နှစ်သစ်ကူးနေ့ အဖြစ် ပါကျင်းပခဲ့ကြသည်။ ထိုကျင်းပသည့် ခုနှစ်မှာ ၁၇၅၂ခု ဖြစ်သည်။
ရိုးရာခရစ်ယန် ဘာသာဝင် တချို့၏ ယုံကြည်မှုများ အရ ခရစ်စမတ် ပွဲတော်အပြီး ရှစ်ရက်မြောက်နေ့ သည် နှစ်သစ်ကူးနေ့ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းနှစ်ရက် တို့သည် ဘာသာရေး ယုံကြည်မှုများနှင့် ဆက်စပ်မှု ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ အကြောင်းမှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အများစုတွင် အသုံးပြုကြသော အနောက်နိုင်ငံ ပြက္ခဒိန်သည် (အေဒီ)ကို အခြေခံ သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် မြောက်ကမ္ဘာခြမ်းတွင် နှစ်တနှစ်၏ အတိုဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး တောင်ကမ္ဘာခြမ်း၏ အရှည်ဆုံးနေ့ ဖြစ်သောကြောင့်ဟု အဆိုရှိသည်။
တနှစ်တာအတွင်း ကုန်ဆုံးခဲ့သည့် အဖြစ်အပျက်များ၏ နိဂုံးကို ရေဒီယို၊ တယ်လီဗေးရှင်း နှင့် သတင်းစာ များတွင် ပြောဆိုရေးသား ပြသလေ့ရှိသဖြင့် နှစ်ဟောင်းမှ နှစ်သစ်သို့ ကူးပြောင်းခြင်းနေ့ အဖြစ် ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက်နေ့ ကို အများက လက်ခံ လာကြသဖြင့် `နှစ်သစ်ကူးနေ့´ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ကြ ပေသည်။ တနှစ်တာ အတွင်း ထူးခြားသော နိုင်ငံရေး အဖြစ်အပျက်များ၊ သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်များ၊ တေးဂီတနှင့် အနုပညာ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊ ထူးခြားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ ကွယ်လွန်သွားသည့်ကိစ္စရပ်များကို ပြန်လည် သုံးသပ်ပြသဖြင့် နှစ်သစ်ကူးနေ့ ကို ဇန်န၀ါရီ(၁)ရက်နေ့အား အများက လက်ခံ အတည်ပြု လာခဲ့ကြသည်။
ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင်နိုင်ငံ အများအပြားသည် ဇန်န၀ါရီ(၁)ရက်နေ့ ကို နှစ်သစ်ကူးနေ့ အဖြစ် သတ်မှတ် ကြခြင်းမှာ အဆင့်ဆင့် ပြောင်းလဲခဲ့ကြသော ပြက္ခဒိန်ကြောင့် ဟု စာပေများတွင် ရေးသား လာကြသည်။ ပြက္ခဒိန် ဆိုသည်မှာ နေ့များ၊ ရက်သတ္တပတ်များ၊ လများစုပေါင်း ထားခြင်းကို ဆိုလိုကြသည်။ ယနေ့သုံးစွဲ နေကြသည့် ပြက္ခဒိန်အရ တနှစ်တွင် ၃၆၅ရက် (သို့) ရက်သတ္တပတ် ၅၂ပတ် (သို့) လ၁၂လ ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ သို့ရာတွင် ၄နှစ်တကြိမ် ၁ရက်တိုးသဖြင့် ၃၆၆ရက် ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ အများ လက်ခံသည့် ပြက္ခဒိန်တခု ဖြစ်မြောက်အောင် လုပ်ရသည့် ကိစ္စမှာ လွယ်ကူသည့်ကိစ္စမဟုတ်ပေ။ နေ့ တနေ့ သတ်မှတ်သည့် ကိစ္စမှာ လွယ်ကူသော်လည်း နှစ်တနှစ် သတ်မှတ်ရသည့် ကိစ္စမှာ မလွယ်ကူပေ။ ဤတွင် ပြက္ခဒိန် အကြောင်း အနည်းငယ် သိရန် လိုပေမည်။ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၆၀၀၀ ကျော်ကျော်က အီဂျစ် နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး ပြက္ခဒိန်ကို အသုံးပြု ခဲ့ကြသည်။ အီဂျစ် ဘုန်းတော်ကြီးများသည် ရက်၊လ၊နှစ် တို့ကို တိတိကျကျ သိရှိရန် လုပ်ကိုင် ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုစဉ်က နှစ်သစ်ကူးနေ့ကို မသတ်မှတ် နိုင်ခဲ့ကြပေ။ ဤပြက္ခဒိန်ကို တချို့ယနေ့တိုင် သုံးစွဲ နေကြဆဲဖြစ်သည်။
နှစ်ထောင်ပေါင်း များစွာ ကြာပြီးနောက် ခရစ်တော် မွေးဖွားသည့် နှစ်၏ နောက်ပိုင်းနှစ်များ ဟူ၍၄င်း၊ ရှေ့ပိုင်းနှစ် များဟူ၍၄င်း သတ်မှတ် လာခဲ့ကြသည်။ ခရစ်မမွေးခင် နှစ်များကို ဘီစီဟု၊ ခရစ် မွေးဖွားပြီးနှစ်များကိုအေဒီ ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ၁၆ ရာစုတွင် ရိုမန်ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းတွင် ၁၃ ယောက်မြောက် ပုပ်ရဟန်းမင်းကြီး ဂရီဂိုရီသည် တိကျ မှန်ကန်သည့် ပြက္ခဒိန်တခုကို သတ်မှတ်ခဲ့ရာ ထိုပြက္ခဒိန်ကို ဂရီဂိုရီယန် ပြက္ခဒိန် ဟုခေါ်ဆို ခဲ့ကြသည်။
သို့ရာတွင် ပရိုတက်စတင့် ဘာသာဝင်များက အထက်ပါ ပြက္ခဒိန်ကို လက်မခံကြချေ။ မည်သို့ပင် ဖြစ်စေ နိုင်ငံတိုင်း တွင် အသုံးပြုလျက် ရှိသော ယနေ့ကာလ ပြက္ခဒိန်မှာ ဂရီဂိုရီယန် ပြက္ခဒိန် ဖြစ်လာခဲ့သဖြင့် နောက်ထပ် အသစ် ပြောင်းလဲ လာစရာ အကြောင်းမရှိတော့ချေ။ ထို့ကြောင့် တနှစ်တွင် ၁၂လရှိရာ ပထမ ဆုံး လဟု သတ်မှတ်ခဲ့သော ဇန်န၀ါရီလ (၁)ရက်နေ့ သည် နှစ်သစ်ကူးနေ့ တနေ့ဖြစ်လာကြောင်း သမိုင်းက သက်သေ ထူခဲ့ပြီ။ ဘာသာရေး အရ နှစ်သစ်ကူးနေ့များ ကွဲပြားမှုများ ရှိကြသော်လည်း နိုင်ငံ အများစု လက်ခံလျက် ရှိနေသည်မှာ………………………
ဇန်န၀ါရီလ(၁)ရက် နေ့ သည် နှစ်သစ်ကူးနေ့ ။ ။
Ref: http://en.wikipedia.org မှ ဘာသာပြန်ဆိုထားသည်။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 11:40 AM3comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 11:32 AM6comments:
မနက်ဖန်ကျရောက်မဲ့ `ခရစ်စမတ်´နေ့ကို ငယ်ငယ်ထဲကရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်နေမဲ့ `Jingle Bell´ တေးနဲ့ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်....ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေကြပါစေလို့..... ရင်ခုန်စရာကောင်းမဲ့ ` Happy Holiday´ ဖြစ်ကြပါစေလို့....
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 2:56 PM2comments:
အခုလို ဆောင်းတွင်းမှာ ဆိုရင် ရန်ကုန်မြို့ သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်း မှာ မနက် စောစော လူကြီး၊ လူငယ် လမ်းလျှောက်တဲ့သူ၊ ပြေးတဲ့သူ၊ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့သူ တွေနဲ့ ပြည့်နေကြပြီ။ လူငယ်တွေ ကတော့ အများအားဖြင့် ကျန်းမာရေး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာထက် ဗရုတ်ကျချင်လို့ ဆိုရင် ပိုမှန်ပါတယ်။
အဲဒီအခါ ကျန်းမာရေး အတွက် အမြဲတမ်း လမ်လျှောက် နေကြ လူကြီးတွေ အတွက်တော့ စိတ် အနှောက်အယှက် ဖြစ်ကြ ရတာပေါ့။ လူကြီးတွေက ကစားကွင်းကို ၃ပတ်၊ ၄ပတ် လျှောက်ကြပြီး သွေးပူ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ကြပြီးမှ ပြန်ကြ ပါတယ်။ တချို့ လူငယ်တွေ ကျတော့ လည်း ကြက်တောင်ရိုက်၊ ဘောလုံးကန် ကြတယ်။
ကျမတို့ ညီအမ လည်း တခါတလေ စိတ်ပါလက်ပါ ထပြီး လျှောက်ကြပါတယ်။ တခါတလေ တော့လည်း ချမ်းချမ်းနဲ့ အစောကြီး မထချင်ပါဘူး။ အဲဒီအခါ လည်း ဖေကြီးက လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဖို့ နှိုးတာနဲ့ပဲ ထကြရပါတယ်။ ကစားကွင်း ထဲမှာ ခရေပင်တွေ လည်းရှိတော့ ခရေပန်း လုကောက်ကြပြီး အိမ်ရောက်ရင် ဘုရားကို ကပ်ရတာ ကလည်း ပီတိဖြစ်စရာ ပါ။
ကျမတို့ ညီအမ နှစ်ယောက် ဟာ စက်ဘီးလည်း မစီးရဲ၊ မစီးတတ်ကြပါဘူး။ ဖေကြီးက စက်ဘီးစီး တတ်အောင် သင်ရမယ် ဆိုတော့ တော်တော် စဉ်းစားခဲ့ ရပါတယ်။ ဗန္ဓုလသွေး အပြည့် ပါတယ်လေ (ကြောက်စိတ် ကများနေလို့) ....။ ဒီလောက် စီးတတ်စေချင်တာ သင်ကြည့်မယ် ဆိုပြီးပြောတော့ မောင်လေး တယောက်က စသင်ပေး ပါတယ်။ ပထမ ရက်တော့ လက်ကိုင်ရော၊ နောက်ကနေပါ ကိုင်ပေးတော့ ဟန်ကျပန်ကျ စီးနေလိုက်တာ အဆင်ပြေ သွားပါတယ်။ နောက်နေ့ကျတော့ လက်ကိုင်ကို မကိုင်ပေးတော့ ဘူးတဲ့။ နောက်ကနေပဲ ထိန်းပေးတော့မယ်တဲ့။ တော်တော် ရနေပါပြီတဲ့... ပြောတော့ သဘောတွေကျ လို့ပေါ့....။ သူက အနောက်က ထိန်းပေးမှန်း သိတော့ ကြောက်စိတ် မရှိပဲ စီးနေလိုက်တာ လှည့်ကြည့် လိုက်တော့ သူက မရှိတော့ဘူး။
ကိုင်ပေးတဲ့သူ မရှိမှန်းလည်း သိရော ယိုင်ထိုးထိုးနဲ့ နင်းသွားလိုက်တာ `ပုဏ္ဍရိတ်´ ပန်းပင်ခြံဘောင်ရိုး ထဲကို အရှိန် မထိန်းနိုင်ပဲ ထိုးဝင် သွားတော့တယ်။ သင်ပေးတဲ့ သူကတော့ ဟိုးအဝေးကြီး ကနေကြည့်ပြီး ရယ်နေပါတယ်။ အဲဒီ နေ့ကလည်း သင်ပေးတဲ့ မောင်လေးက သူ့ရဲ့မျက်မှန်ကို ပေးထားလို့ ကိုယ့်ရင်ဘတ်မှာ ချိတ်ထားလိုက်တာ... စက်ဘီးရော၊ လူရော မှောက်ပြီး ကျမ မထနိုင်တော့ ပါဘူး။ ကြည့်လိုက်တော့ မျက်မှန်လေး ကလည်း အစိပ်စိပ် အမွှာမွှာ.... ကျမမှာ နာလည်းနာ၊ လူတွေကလည်း ပြုံးစိစိ နဲ့ကြည့်နေတော့ ကြောက်စိတ်ရော၊ ရှက်တဲ့စိတ်ပါ ရောထွေးပြီး နေပါတယ်။ ကျမမှာ သူများ တကာတွေ အလွယ်တကူ စီးနိုင်တဲ့ အလုပ်ကို ကျမ ကြောက်စိတ် ကြောင့် မစီးတတ်ခဲ့ ပါဘူး။ တခါတရံ မှာ လူတွေဟာ ကြောက်စိတ်နဲ့ ကင်းအောင် နေထိုင် တတ်ရင်လည်း ကောင်းပါတယ်။ ကြောက်စိတ် ရှိတိုင်း အရာရာ မအောင်မြင် တော့ပါဘူး။ (ကျမအတွေ့အကြုံအရပေါ့) ... ကြောက်စိတ်ကြောင့် တချို့နေရာ တွေမှာ အဟန့်အတား ဖြစ်နိုင်လာ ပါတယ်။
ကျမ တူမလေး ကိုတော့ ကျမနဲ့ မတူအောင် ငယ်ငယ်လေး ထဲက စက်ဘီးကို စီးတတ်အောင် သင်ပေးခဲ့တယ်။ စစီးခါစတော့ နောက်ဘီး ဘေးနှစ်ဘက်မှာ ခွပြီးဘီးနှစ်ဘီး တပ်ပေးထား ပါတယ်။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စီးတတ် လာတော့ နောက်က ဘီးနှစ်ဘီး ကိုဖြုတ်ပေးလိုက် တော့လည်း စီးတာများ ကျွမ်းကျင်လို့။ သိပ်မကြာ လိုက်ပါဘူး... လူကြီး စက်ဘီး အကြီးရပ်ထားတာ ကို သူ့ဟာသူ ယူစီးတာ အဆင်ပြေ ချောမွေ့လို့... ကိုယ်က အံ့အားတကြီးနဲ့ သမီးလေး ဘယ်လိုစီးလိုက် တာလဲဆိုတော့ သမီးလည်း ရမလားလို့ တက်စီးကြည့် လိုက်တာ ရသွား တာတဲ့။ ကျမ မစီးတတ်တဲ့ စက်ဘီးကို သူကစီးတတ်လို့ ၀မ်းသာ နေလိုက်တာများ...။ တကယ်တော့ သူ့မှာ ကြောက်စိတ် မရှိလို့ပါ။ ကြောက်စိတ် မရှိတော့ အဟန့်အတား မဖြစ်ဘူးဆိုတာပါ။ ဒါနဲ့ ကျမလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားပြန်တင်းပြီး ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ မလဲပေါ့...
တစုံတခု ကို ကြောက်စိတ် ၀င်သွားရင် အဲဒီ တစုံတခုရဲ့  သားကောင် ဖြစ်သွားကြ ရတာ ပါပဲ.......
ကျမလည်း သားကောင် မဖြစ်အောင်တော့ ကြောက်စိတ် ကို ဖယ်ဖို့ ကြိုးစား ရတော့မယ်..........
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:11 AM3comments:
အခုလို နေမကောင်းတဲ့ အချိန် မှာ အမေ့ကို ပိုလွမ်းတယ်။ စားချင်တာ တွေ ချက်ပေးတယ်။ ဘေးနား ကနေ အကုန်လုံး လုပ်ပေး နေတော့တာပဲ။ ဖေကြီး ကတော့ ဒိုင်ခံပြီး ဆေးတိုက် တာလေ။ ဘယ်နား ညောင်းလဲနဲ့ နှိပ်ပေး နေတော့တာ။ မိဘ ဆိုတော့ အားနာစရာ မလိုရဘူး ပေါ့။ ဒီနေ့တော့ တယောက်တည်း နေမကောင်း ရင်းနဲ့… စိတ်ကတော့ လူနဲ့ တခြားစီ ပါလားလို့….
စိတ်က ဖေကြီးတို့ မေကြီးတို့ ဆီ ရောက်သွားလိုက်၊ အလုပ်ထဲ စိတ်ရောက်သွားလိုက် နဲ့ ဂဏှာ မငြိမ်ပါလား…ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ မလဲလို့ တယောက်တည်း စဉ်းစားရင်း ဆေးသောက် ရအုံးမယ် ဆိုတော့ အစားလေး တော့ စားအုံးမှ ဆိုပြီး ခေါက်ဆွဲပြုတ် ထပြုတ်ပြီး စားလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ဆေးသောက်ပြီး ပြန်လှဲ နေလိုက်တယ်။ ခေါင်းက ဘယ်လိုမှ မထူနိုင်ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ လူကသာ လှဲနေတာ…
စိတ်ကတော့ လျှောက်ပြေး နေလိုက်တာ … မိုင်ပေါင်း ကုဋေကုဋာ ဆိုတာ လိုပေါ့…. မေကြီးရှိရင် ဒီအချိန်ဆို ဘာလုပ် ပေးနေမလဲ နဲ့လည်း တွေးနေ သေးတယ်။ မိတ်ဆွေ တယောက်က လှမ်းပြောတယ်။ ဝေဒနာ ခံစားနေရတဲ့ အချိန်မှာ တရား ကိုရှုပါတဲ့။ ဝေဒနာ ကို ရှုပါတဲ့.....။ အဲဒီ အချိန်မှာ ဘာဝေဒနာမှ မရှုနိုင်ပဲ စိတ်တွေက ပြေးနေလို့ မနည်း လိုက်ဖမ်း နေရတယ်လေ။ တကယ့် တကယ် ဖြစ်လာတော့ ဘာဝေဒနာမှ မရှုနိုင် ပါလားလို့.....။ ဒါကြောင့် နေကောင်းတဲ့ အချိန်မှာ (လုပ်နိုင်တဲ့အချိန်) မှာ ဘုရား တရား ပိုလုပ်ပါလို့ ပြောကြတာ ကိုး ...။ နေမကောင်းတဲ့အချိန် ဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ လို့လေ။
အင်း...... ဘာရယ်လို့ မဟုတ်ပါဘူး။ နေမကောင်းတုန်း လွမ်းနေရတာလေး ချရေး မိတာပါ...။
(ဟိုနေ့က နေမကောင်းတုန်းက ခံစားချက်လေး ပါ...)
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 5:03 PM No comments:
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် `ကိုကိုကြီး´ ရဲ့မွေးနေ့
ဒီဇင်ဘာ (၁၈)ရက် နေ့မှာ ကျရောက် ခဲ့တဲ့ ၈၈မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် `ကိုကိုကြီး´ရဲ့ (၄ဂ)နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှာ သူ့ကို ချစ်တဲ့ မိသားစု တွေနဲ့ နိုင်ငံတကာ က ရဲဘော် မိတ်ဆွေတွေ က ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ မွေးနေ့ရှင် ကတော့ မိသားစုတွေနဲ့ ဝေးရာ မိုင်းဆတ်ထောင် မှာ။ တိုင်းပြည် အပေါ်မှာ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာ ခံပြီး သက်စွန့်စံဖျား တိုက်ပွဲဝင် နေတာဟာ နောက် မျိုးဆက်သစ် တွေ အနေနဲ့ အတုယူစရာ၊ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် `ကိုကိုကြီး´ ရဲ့ `နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား ဆိုတာ ဘာလဲ…ဘယ်သူ တွေလဲ…´နဲ့ အမေနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကိုယ်တိုင် ရေးထားတဲ့ ၀တ္ထု`လားရာ´ဆိုတာ ကို ဒီလင့် မှာ ဖတ်ရှုနိုင် ပါတယ်။
(၄၈)နှစ်မြောက် မွေးနေ့မှ စပြီး အကျဉ်းထောင် မှ အမြန်ဆုံး ပြန်လည် လွတ်မြောက်ပြီး စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ကျန်းမာ နဲ့ တိုင်းပြည် အကျိုးကို စိတ်ထဲမှာ ရှိတဲ့အတိုင်း လုပ်ဆောင် နိုင်ပါစေ။
တောင်းတဲ့ဆုနဲ့ အမြန်ဆုံး ပြည့်ဝ ရပါလို၏..........
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:04 PM No comments:
`ပဲပြုတ်…ပဲပြုတ်…´ဆိုတဲ့ အသံကြောင့် ကျမ လန့်နိုးလာခဲ့တယ်။ ဘေးနားက နာရီ ကိုကြည့်လိုက်တော့ မနက် ၆နာရီ တောင်ထိုးတော့ မှာပဲ။ ဟာ…၇နာရီဆို အတန်းချိန် စတော့မှာ မြန်မြန် ထပြင်ဆင်ပြီး ကျောင်းသွား ရအုံးမယ်။ ညက စာကြည့်တာ အတော် ညဉ့်နက် သွားတာကိုး။ မထချင် ထချင်နဲ့ ထပြီး ရေချိုးပြင်ဆင် ရအုံးမယ်။ ဒီမနက် တော့ မနက်စာ စားဖို့ အချိန် မရတော့ဘူးပဲ။ ဖေကြီးကို မနက်စာ ကျောင်းမှာပဲ စားတော့မယ် ဆိုပြီး ပြောတော့ ဖေကြီးက ဗိုက်ဆာ နေလိမ့်မယ်တဲ့။ နည်းနည်း စားသွား ဆိုတော့ စိတ်ကျေနပ်အောင် နည်းနည်းစား လိုက်ရတယ်။ ပြီးတော့ ကမန်းကတန်း အိမ်က ထွက်လာခဲ့တယ်။ လမ်းရောက်တော့မှ လေအဝေ့တချက် ခပ်ကြမ်းကြမ်း တိုက်လိုက်တဲ့ အခါ စိမ့်ပြီး အေးသွားတယ်။ အဲဒီတော့မှ ကြည့်လိုက်တော့ သြော်…ဒီနေ့ အနွေးထည် ၀တ်မလာမိ ပါလားလို့။
ကားဂိတ်မှာ ကားစောင့်နေရင်း ဟိုကြည့် ဒီကြည့်နဲ့ ကားရောက် လာတော့ ကားပေါ်တက် လိုက်တယ်။ လမ်းတလျှောက်လုံး အအေးဒဏ် ခံစားရင်း စာသင်မဲ့ ဆရာမဆီ ကိုသာ စိတ်က ရောက်နေတယ်။ ၇နာရီ သင်မဲ့ ဆရာမက စာအသင်အပြ အရမ်း ကောင်းတယ်။ စိတ်ကူးရင်းနဲ့ စီးလာလိုက်တာ မြေနီကုန်းကျော် လို့ လှည်းတန်းတောင် ရောက်ခါနီးပြီပဲ။ ကားပေါ်က ဆင်းဖို့ အဆင်သင့် ရပ်နေ လိုက်တယ်။ လှည်းတန်း မှတ်တိုင် ရောက်တော့ ကားပေါ်က ဆင်းပြီး ခပ်သုတ်သုတ် လျှောက်လာရင်း ဒီအချိန်ဆို အတန်းထဲမှာ စာသင်နေလောက် ပြီလို့ တွေးရင်း လျှောက်လာ ခဲ့တယ်။ အတန်းထဲ မသွားခင် စာကြည့်တိုက် ရှေ့မှာ သူငယ်ချင်းတွေ ဆုံနေကြ ဆိုတော့ သူတို့တွေ ငါ့ကို စောင့်နေလောက် ပြီပေါ့။ တမျှော်မျှော်နဲ့ စောင့်နေကြတဲ့ သူတို့က လည်း ကိုယ့်ကို တွေ့တော့ ဘာဖြစ်လို့ နောက်ကျတာ လည်းတဲ့။ ကျမလည်း သူတို့ အမေးကို မဖြေတော့ပဲ လာ…လာ အတန်းထဲ မြန်မြန် သွားကြမယ်ဆိုပြီး ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ လမ်းတလမ်းလုံး လည်း ကံ့ကော်ပန်း ရနံတွေ မွှေးပျံ့ နေလိုက်တာ…
အတန်းထဲ ရောက်တော့ ဆရာမက စာသင်နေပါပြီ။ ကျမတို့လည်း ခပ်ရို့ရို့ ၀င်ထိုင်ရင်း စာအုပ် ထုတ်ပြီး မှတ်စုလိုက် ရေးလိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တချိန်ပြီး တချိန် သင်လိုက်တာ နေ့လည် ၁၂နာရီတောင် ထိုးသွားပြီ။ ဗိုက်ထဲ ကလည်း ဆာလိုက်တာ။ ဒီနေ့တော့ ၁နာရီဆို အတန်းချိန် ပြီးပြီ ဆိုတော့ သူငယ်ချင်းတွေ တနေရာရာ သွားဖို့ စိတ်ကူးထား ကြတယ်။ ၁နာရီ ထိုးလို့ စာသင်ချိန်လည်း ပြီးရော သူငယ်ချင်းတွေ ရှစ်မိုင် လမ်းဆုံက (junction 8) ကို သွားခဲ့ကြတယ်။ တလမ်းလုံး စကားတွတ် ထိုးပြီး မတွေ့ရတာ အတော်ကြာ နေကြတဲ့ သူတွေလိုပဲ။ (junction 8) မရောက်ခင် ထမင်းသုပ်ဆိုင် ကောင်းတယ်။ ၀င်စားကြမယ် ဆိုပြီး စားကြတယ်။ ပြီးတော့မှ (junction 8) ကို လာကြပြီး လျှောက်ကြည့်ကြ လိုတာတွေ ၀ယ်ကြတယ်။ (junction 8) ထဲက (J Donut) မှာ အအေးဝင် သောက်လိုက် ကြသေးတယ်။ ပြီး ဘယ်သွားအုံးမလဲ ဆိုတော့ ကျမက စာအုပ်တန်းဘက် ကို သွားချင်တယ် ပြောတော့ အားလုံး ကလည်း တညီတညွတ်တည်း သွားမယ်တဲ့။ အဲဒါနဲ့ (junction 8) ထဲက ပြန်ထွက်လာပြီး ရန်ကုန်မြို့ထဲ ဘက်ကို ကားစီး လာခဲ့ကြတယ်။
စာအုပ်တန်း မှာ တဆိုင်ဝင် တဆိုင်ထွက် နဲ့ စာအုပ်တွေ ကြည့်ရတာ အရမ်း ကောင်းတာပဲ။ နောက်ဆုံး `အမေ့အိမ်´ဆိုင်က ဖတ်ချင်တဲ့ စာအုပ် တချို့  ၀ယ်လာ ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဘယ်သွားရင် ကောင်းအုံး မလဲလို့…. တရုတ်တန်း ဘက်ကို သွားကြမယ် ဆိုတော့ အားလုံးက ခေါင်းညိတ် ကြတယ်လေ။ တရုတ်တန်း ဘက်မှာ စားစရာ တွေက အများကြီးလေ။ စာအုပ်တန်း ဘက်က လျှောက်လာရင်း ဆိုင်တန်းတွေ ငေးပြီး လျှောက်လာ လိုက်တာ တရုတ်တန်း ကို ရောက်နေပြီပဲ။ ရောက်တော့ အားလုံး အကြိုက် အရင်ဆုံး ၀က်သား ဒုတ်ထိုး စားကြတယ်။ ဘေးနားမှာ ကြည့်လိုက် တော့ ကော်ပြန့်စိမ်းဆိုင်။ အား… ကော်ပြန့်စိမ်း လည်း စားလိုက် အုံးမယ် ဆိုပြီး စားကြပြန်တယ်။ ပြီးတော့ `ချစ်စရာ´ အအေးဆိုင် ကို လမ်းလျှောက်ကြပြီး ကူလ်ဖီး စားကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေ ကတော့ ဖါလူဒါ စားတဲ့သူနဲ့ သစ်သီးဖျော်ရည် သောက်တဲ့သူ နဲ့ပေါ့။ ထုံးစံ အတိုင်း သူ့ဟာ ကိုယ်ယူစား ကိုယ့်ဟာ သူယူစားနဲ့ ပျော်စရာ ပေါ့။ အင်း နာရီ ကြည့်လိုက်တော့ ညနေ ၅နာရီ တောင် ထိုးနေပြီပဲ။ ဖေကြီးကို ကြိုပြော ထားရတယ်။ မဟုတ်ရင် ပြန်တာ နောက်ကျလို့ စိတ်ပူ နေအုံးမယ်။ ပြီးတော့မှ လမ်းခွဲပြီး အိမ်ပြန် လာကြတယ်။ ကျန်တဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ က လှည်းတန်း နဲ့ အင်းစိန် နဲ့ ကိုးမိုင် နဲ့ပြန်မှာ ဆိုတော့ လမ်းတူကြတယ်။ ကျမ သာ တာမွေဘက် ပြန်မှာ ဆိုတော့ သူတို့နဲ့ မတူ တယောက်တည်း ပြန်လာခဲ့တယ်။
လမ်းတလမ်း လုံးလည်း မနက်ဖန်မှာ လုပ်ရမဲ့ (ပရက်တီကယ်) လက်တွေ့ အကြောင်း စဉ်းစားရင်း အတွေး နယ်ချဲ့  လာခဲ့တာ အိမ်နားကိုတောင် ရောက်ခါနီး လာပြီ။ အင်း… ဒီနေ့တော့ သွားချင်တဲ့ နေရာတွေ သွားလိုက်ရတဲ့ အတွက် စိတ်ချမ်းသာ သွားတယ်။ ဖေကြီးတို့ ကတော့ ထမင်းစားဖို့ စောင့်နေကြမှာ။ အိမ်ရောက်တော့ ဖေကြီးက ပင်ပန်း သွားပြီလားတဲ့။ ပင်ပန်းတာ ပေါ့လို့ ပြန်ပြောတော့ ထမင်းစားကြမယ် တဲ့။ ဆာတော့ မဆာ သေးဘူး။ ဒါပေမဲ့ မစားရင် လည်း စိတ်မကောင်းမှာ စိုးလို့ ၀င်စား လိုက်တယ်။ ထမင်းစားပြီး ခန နားတုန်း ၀ယ်လာတဲ့စာအုပ်တွေ ဖတ်ကြည့်လိုက် အုံးမယ် ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်တာ။
တူမလေး က `တီတီကြီး´ သမီး ကျောင်းသွားတော့မယ် `တာ့တာ´ ဆိုတဲ့ အသံကြားမှ ဟင်…. ငါဘယ်ရောက် နေပါလိမ့် လို့ကြည့်လိုက်တော့ …. ကိုယ့်အိမ်၊ ကိုယ့်မြေ မဟုတ်တဲ့ နေရာလေး တခုမှာ အိပ်စက် နေတာပါလား…
အေးစက် နေတဲ့ ပါးပြင်ပေါ် မှာတော့ မျက်ရည်စ တချို့ ……….
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 12:17 PM 1 comment:
ကိုမင်းကိုနိုင် ရဲ့ `နောက်ကြည့်မှန်´၀တ္ထုကို စာရေးသူကို အကြောင်းကြား လို့မရနိုင်ပဲ ကျွန်မ တင်ဖြစ် လိုက်တယ်။ စာရေးသူ ကတော့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အလွန် ဝေးကွာ လွန်းတဲ့ အကျဉ်းထောင် မှာ သူ့ရဲ့ဘ၀ ကို ပေးဆပ်ရင်း အကျဉ်းထောင် ခန်းထဲမှာ တယောက်တည်း ဘာတွေများတွေးနေလိမ့်မလဲလို့ စဉ်းစား ကြည့်မိတယ်။ တော်လှန်ရေး လုပ်ရင်း အနုပညာ ၀ါသနာ ပါတဲ့သူ တယောက် အနေနဲ့ ရေးတဲ့ ၀တ္ထု မို့လို့လည်း စိတ်ဝင်စား မိတယ် လို့ပြောရမယ်... ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုမင်းကိုနိုင် ၀တ္ထုလေး ဖေါ်ပြမိတဲ့ အတွက် ခွင့်ပြုဖို့ ဒီကနေ အထပ်ထပ် တောင်းပန် နေမိတယ်...
ဖတ်တဲ့သူ အားလုံး စာနာ နားလည် နိုင်ပါစေလို့.....
" Rear View Mirror " by Ko Min Ko Naing
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:33 AM No comments:
ယနေ့ မြန်မာပြည်က လူတွေဟာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့ လုပ်နေရတာ နဲ့ တထပ်တည်း ကျဖို့ ခက်ခဲ ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ စနစ် ကြောင့်ပါပဲ။ ကွန်ပြူတာ နဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့ သူတွေက လည်း စာရင်းကိုင် လုပ်လိုလုပ်၊ သချာင်္နဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့ သူတွေက လည်း ကွန်ပြူတာ နဲ့လုပ်လို လုပ်နဲ့ တခြားစီ ဖြစ်နေကြ တယ်နော်။
ယနေ့ ဘွဲ့ရ လူငယ် တွေကလည်း နိုင်ငံခြား ထွက်ပြီး အလုပ်လုပ် နေတဲ့ အခြေအနေ ရောက်နေ ကြရတာကိုး။ အဲဒီတော့ ရတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်နဲ့ မတူနိုင် တော့ဘူးလေ။ သူငယ်ချင်းထဲက တယောက်က ဓါတုဗေဒ (ဂုဏ်ထူးတန်း) နဲ့ ဘွဲ့ရပြီး ခေါင်းလျှော်တဲ့ ဆိုင်ဖွင့်ပြီး ခေါင်းလျှော် နေရတယ်။ ဒါဟာ ဘယ်လိုမှ မအပ်ဆက် ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လည်း လတ်တလော စီးပွားရေး အရ လုပ်နေရ တာပဲလေ။ ၀ါသနာ ပါချင် မှလည်း ပါနိုင်တယ်။
အမှန်မှာ တော့ ဓါတုဗေဒ နဲ့ ဘွဲ့ရတဲ့ သူတယောက် ဟာ သူနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ ရေသန့် တို့လို… စက်ရုံမှာလို… သုတေသန တွေမှာ ဓါတ်ခွဲခန်း တွေမှာလို… ရှိသင့်တာပေါ့။ ကိုယ့်ရဲ့ ပညာနဲ့ ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ် တခြားစီ ပါလားလို့ တွေးမိလိုက် တဲ့အခါ… အရာ အားလုံးကို လိုက်လျော ညီထွေအောင် လုပ်နေရတဲ့ အခါ တွေမှာ တိုးတက်မှု မရှိနိုင်ဘူး လို့ ထင်တယ်လေ။ ကိုယ်လည်းပဲ ဒီလိုပဲ ၀ါသနာ ပါတာနဲ့ ရတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ လုပ်ရတဲ့ အလုပ်နဲ့ တခြားစီ ပါပဲ။
ဒါပေမဲ့ ရတဲ့ ဘွဲ့နဲ့လည်း နောင်တချိန် အကျိုးပြုနိုင် အောင် အခု လုပ်နေရတဲ့ အလုပ် နဲ့လည်း အဆင်ပြေ အောင် နေရတာ ပါပဲ။ သူငယ်ချင်း အများစု ကတော့ တက္ကသိုလ် ဆရာမ အဖြစ် ရပ်တည်ကျတော့ သူတို့ ကတော့ လိုက်လျော ညီထွေ ရှိတာပေါ့။ သူဌေး မဖြစ်ပေမဲ့ ကိုယ်ရတဲ့ ဘွဲ့နဲ့စာပြန်သင် ရတော့ အကျိုးရှိ တာပေါ့။ အများကြီး လည်း တိုးတက် နိုင်တယ်လေ။
ဆယ်တန်း အောင်ပြီးရင် ဘာ ဆက်တက်မလဲ…….ဘွဲ့ရပြီး ဘာလုပ်မလဲ လို့ စဉ်းစားကြတယ်….. အဲဒီတော့ မိဘ တွေက လည်း ဆေးလိုင်း၊ အင်ဂျင်နီယာလိုင်း ၀င်စေချင် ကြတယ်။ ဒါတွေနဲ့ ဘွဲ့ရပြီးရင် အဆင်ပြေနိုင် တယ်လေ။ အဲဒီတော့ ၀ါသနာ မပါနဲ့ပဲလည်း မိဘတွေက ဆရာဝန်လိုင်း တက်စေချင်ကြလို့ တက်ခဲ့ကြရ… တက်နေကြရတဲ့ သူတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ ၀ါသနာ မပါပဲ တက်ကြရတော့ လည်း ထူးချွန်သင့် သလောက် မထူးချွန်နိုင် ကြဘူးလို့ ထင်တယ်။ တချို့ ကျတော့ လည်း ဘွဲ့ရရင်ပြီးရော တက်လိုက်တာပဲ။
ပြီးမှ ကြုံတဲ့ အလုပ် ၀င်လုပ် ကြတယ်။ ဘာတွေများ လာသလဲ ဆိုတော့ ပုဂ္ဂလိက သင်တန်းတွေ အများကြီး ဖွင့်လာ ကြတယ်။ ဒါကလည်း အများစု ကတော့ ပိုက်ဆံရှိ သားသမီးတွေပဲ တက်နိုင်တဲ့ သင်တန်း တွေလေ။ အဲဒီအခါ ပိုက်ဆံ ရှိတဲ့ သူတွေ ကိုတော့ အဲဒီ သင်တန်း တွေမှာပဲ အများဆုံး တွေ့ရတတ်တယ်။ ပြီးတော့ နိုင်ငံခြား စာမေးပွဲတွေဖြေ၊ နိုင်ငံခြားမှာ ပညာတွေ သင်လို့ အလားအလာ ကောင်းသွား တာပေါ့။ တစတစ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ အပြင်ဘက် ကို ရောက်သွားရ တာပဲလေ။
ဖြစ်ချင်တာ မဖြစ်ကြရတဲ့ အခြေအနေမှာ လုပ်နေကြရတဲ့ အလုပ်ကိုပဲ အစွမ်းကုန် ကြိုးစားပြီး နေသွားမယ် ဆိုရင် ပျော်ရွှင်မှု၊ စိတ်ချမ်းသာမှု ကိုတော့ မလွဲမသွေ ရနေမှာပါ။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 3:33 PM No comments:
လူတွေရဲ့ စိတ်ဟာ နေရာ ဒေသ၊ အချိန် အခါ၊ အသက် အရွယ်၊ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲ သွားတယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒါကလည်း လူတိုင်း အတွက်တော့ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မယ်။ တချို့လည်း ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါတွေကို ကြည့်ပြီး ကိုယ်က ဘယ်လို နေထိုင်ရမလဲ ဆိုတဲ့ အသိစိတ် ကလေးတော့ ရသွား ပါတယ်။ နေရာ ဒေသ ကို လိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတယ် ဆိုတာ ကတော့ အပြည့်အ၀ မမှန်ဘူးလို့ ထင်တယ်။
စကားပုံ ကလည်း `ရောမကို ရောက်ရင် ရောမလိုကျင့်´ ဆိုတာ ကလည်း ရှိသေးတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင် ကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းတယ် ဆိုတာ ကလည်း ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တသားတည်း ဖြစ်သွားလောက် အောင် ဘယ်လို အရာ တွေကများ ဖြစ်သွား တာလဲ။ `သဲကုန်းဆရာတော် အသျှင် ဥာဏိဿရ´ ဟောဖူးတယ်။ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ ပတ္တမြား ဟာ ဘယ်နိုင်ငံ ကို ရောက်ရောက် အရောင် မပြောင်းသွား သလိုပဲ လူတွေလည်း ဘယ်နိုင်ငံပဲ ရောက်ရောက် အရောင် မပြောင်းသင့် ဘူးတဲ့။ စိတ် ဆိုတာကလည်း ပြောင်းလဲတဲ့ သဘော ရှိလေတော့ အတိအကျ ပြောဖို့တော့ ခက်ပါလိမ့်မယ်။
တချို့ ကျတော့ လည်း စိတ်က အမြဲပြောင်းလဲ နေတယ်။ အခု ကောင်းလိုက်၊ အခု မကောင်းလိုက်နဲ့၊ အဲဒါမျိုး ကျတော့ ဆက်ဆံရ ခက်တယ် နော်။ သူက စိတ်ကောင်းဝင် နေတာလား၊ စိတ်မကောင်းတာလား ဆိုတာ သိမှ မသိနိုင်ပဲ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ကတော့ ပြောင်းလဲ နေတာ သတိ ထားမိချင်မှ ထားမိမယ်။ ကျွန်မ ရှေ့မှာ စိတ်ကောင်းလိုက်၊ တော်ကြာ တမျိုးဖြစ်ပြီး စိတ်မကောင်းလိုက် လူမျိုး တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ စိတ်ကောင်း ၀င်တုန်းတော့ အရမ်း ကောင်းတာပဲ။ တော်ကြာ သူ့ဟာနဲ့သူ စိတ်မကောင်းပြီး ဆက်ဆံတာ တမျိုး ဖြစ်နေပြန် တယ်။ အဲလို လူမျိုးရဲ့ စိတ်ကို လည်း နားလည်နိုင်အောင် ကြိုးစားခဲ့ ပါတယ်။ တခါတလေ ကျတော့လည်း ကိုယ့် ဘက်ကချည်း တဘက်သတ် နားလည် နေရသလို ဖြစ်နေတယ်။ စိတ်ပြောင်းလာမလား စိတ်ပြောင်းလာ မလား နဲ့စောင့်နေရင်း မပြောင်းလဲတဲ့ သူတွေလည်း ရှိတယ်။
စိတ်ကိုဖြူစင်အောင် ထားတတ်ခြင်းဟာ တပါးသူရဲ့ စိတ်ကိုလည်း ပြောင်းလဲ သွားစေ နိုင်တယ်လို့ ကျွန်မ ထင်တယ်။ တချို့ ကျတော့ လည်း ကိုယ့်ဘက်က ရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လို လူမျိုးကို မဆို အောက်ကျို့ခံပြီး ပေါင်းဖို့ ၀န် မလေးပြန်ဘူး။ ကျွန်မ ကတော့ လူတမျိုး၊ ကျွန်မ စိတ်မပါရင် ဘယ်လို လူမျိုးကိုမဆို ဆက်ဆံဖို့ ခက်တယ်။ ကျွန်မ မျက်နှာမှာ အထင်းသား ပေါ်နေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အတွက် ဘာပဲရမယ် ပြောပြော ကျွန်မ စိတ်မ၀င် စားဘူး။ အဲဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မမှာ တော်ရုံ အပေါင်းအသင်း မရှိဘူး။ ကျွန်မရဲ့ အပေါင်းအသင်း တွေက ကျွန်မ စိတ်နဲ့ တော်တော်လေး တူတဲ့သူ တွေပါ။ အရေးကြီးတာ ကတော့ ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါး စိတ်ကို မထိခိုက် စေဖို့ပါ။ ကျွန်မလည်း ကိုယ့်ကြောင့် သူတပါးရဲ့စိတ် ထိခိုက် နစ်နာမဲ့ အလုပ်မျိုး ဘယ်တော့မှ မလုပ်မိအောင် နေပါတယ်။ ကျွန်မ ကတော့ တပါးသူကြောင့် စိတ် ထိခိုက်စရာ တွေကြုံခဲ့ရဖူးတယ်။ အဲဒီ အခါလည်း နေထိုင်တတ် အောင် ကိုယ့်စိတ်ကို ဆုံးမပြီးနေခဲ့ ရတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ဘက် ကိုယ့်ဘက် ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ကလေးထားပြီး အားလုံးကို ဆက်ဆံနိုင် မယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာကြီးပေါ်က လူသားတွေ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာ ကြမှာပါ။ လူသားတွေ အားလုံး စိတ်ချမ်းသာရင် ကမ္ဘာကြီးလည်း သာယာ လှပနေမှာ မလွဲဧကန် ပါပဲ။
စိတ်ထဲ ပေါ်လာတာလေး ရေးလိုက်တာပါ။ တခါတလေ စိတ်ထဲအခန့်မသင့်တဲ့ အခါပေါ့။
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 10:20 AM No comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:34 PM No comments:
ရေးသားသူ သဒ္ဓါလှိုင်း at 1:28 PM 1 comment: